वनभोज गएका घुमुवा प्रहरीबीच कुटाकुट, २२ जनामाथि विभागीय कारवाही « नेपालबहस
प्रकाशित मिति : २१ पुष २०७७, मंगलवार १५:०९
२१ पुष, पोखरा । पोखरामा वनभोज गएका घुमुवा प्रहरीबीच कुटाकुट भएको छ । पोखराका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुमा कार्यरत घुमुवा प्रहरीहरुबीच वनभोज गएका बेला कुटाकुट भएको हो ।
पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत लेखनाथको खराने फाँटमा गएको शनिबार वनभोज गएका उनीहरुबीच कुटाकुट भएको कुरा स्थानीयले थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । वनभोजमा घुमुवा प्रहरीले रक्सी खाएर नाचगान गर्दा कुटपिट भएपछि पत्रकार समेत पुगेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत घुमुवा प्रहरी हवल्दार भरत भुजेल र वडा प्रहरी कार्यालय बगर पोखरामा कार्यरत प्रहरी हवल्दार जनक रावतबीच शुरुमा भनाभन मात्रै भएको थियो । दुवै मातेका घुमुवा प्रहरीबीचमा शुरुमा भनाभन भएपनि पछि निकै कुटाकुट नै भएको हो । प्रहरीकै वनभोजमा कुटाकुट भएपछि स्थानीय पनि अचम्मित भएका थिए । प्रहरीबीच कुटाकुट भएको स्थानीयले थाहा पाएपछि पत्रकार बोलाइएका थिए ।
पत्रकारले खिचेको फोटो र भिडियो डिलिट !
वनभोज कार्यक्रममा घुमुवा प्रहरीबीच कुटाकुट भएको घट्ना पत्रकारले गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्यो । पत्रकारले समाचार लेख्न खोजेपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठ र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी घनश्याम अर्यालको आग्रहमा रोकिएको बताइएकाे छ ।
समाचार बाहिर ल्याउनका लागि प्रत्रकारले फोटो र भिडियो समेत खिचेका थिए । पछि त्यो भिडियो हटाइएको छ । फोटो पनि डिलिट गरिएको छ । आफ्नो मातहत रहने गरी गठन भएको जिल्ला र प्रदेश स्तरको सुचना संयन्त्र अन्तरगतका घुमुवा प्रहरीहरु आपसमा झगडा गरेर स्थानिय जनताको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको समाचार बाहिरिदा आफूहरु पनि कारबाहीको भागिदार हुन सक्ने भन्दै हाकिमकै आग्रहमा समाचार रोकिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले पैसा असुल्न राखेका घुमुवाहरु बीच लेनदेन मै विवाद भएको जनाइएको छ । उनको निर्देशनमा पोखराबाट व्यापक रुपमा हप्तावारी र महिनावारी असुल्ने गरिएको बताइएको छ । उनले नै केही पत्रकारलाई भनेर उक्त समाचार रोक्ने प्रयास गरेका थिए । ।
अनुशासन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही
प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी अर्यालले वनभाेजमा होहल्ला गर्ने घुमुवा प्रहरीहरुलाई कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । तर यसका लागि उनीहरुको समाचार बाहिर ल्याउन नहुने शर्त राखेका थिए । उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि पत्रकारले समाचार लेखेनन् ।
देखिने गरी कारबाही नभएपनि उनीहरुमाथि अनुसन्धान शुरु गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । कास्की जिल्लाभित्रै दरबन्दी रहेका घुमुवा प्रहरीहरुलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतको सशस्त्र प्रहरी गण पार्दीमा पठाइएको छ ।
प्रहरीले काज फिर्ता गरेका तथा जिल्लाभित्र दरबन्दी रहेकालाई गणमा पठाएकाहरुमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रसनिद्वय बिजय थापा, कमल बस्याल, सुरज रिमाल लगायत चारजना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका घुमुवा प्रमुख असई बिशाल थापा, प्रहरी हवल्दार भरत भुजेल, रमेश नेपाली, एलिजा शर्मा पाैडेल र रामशरण तिवारी, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका कृष्णप्रसाद ढकाल, हरेराम चौधरी र गुरुङ तथा डाँडाकोनाक प्रहरी चौकीका एकजना, वडा प्रहरी कार्यालय बगरका जनक साउद लगायत दुई जना छन्।
कारबाही भयो, तर कसरी ?
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सुचना अधिकारी डीएसपी राजेन्द्रबाबु रेग्मीले संगठनको अनुमति नलिई वनभाेज आयोजना गरेको पाइएकाले २२ जना प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको बताए ।
उनका अनुसार रक्सी खाएर वनभाेजमा होहल्ला गर्ने घुमुवा प्रहरी विरुद्ध छानबिन प्रक्रिया चलेको छ । कास्की जिल्ला बाहिर दरबन्दी रहेका १५ जनालाई आफ्नै दरबन्दीमा फिर्ता गरिएको छ । यस्तै कास्की जिल्लाभित्र दरबन्दी रहेका सात जना प्रहरी कर्मचारीहरुलाई पोखराको पार्दीस्थित प्रहरी गणमा पठाइएको छ।
त्यसो त घुमुवा प्रहरीको रुपमा पोखरामा रहेको भए पनि त्यस वनभाेजमा नपुगेका घुमुवा प्रहरीहरु भने कारवाहीबाट बचेकाे दाबी गरिएको छ । वनभाेजमा संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय गण्डकी तथा वडा प्रहरी कार्यालय राम्बजारका घुमुवा प्रहरीहरु सहभागी नभएकाले उनीहरु बचेका हुन् ।
प्राप्त अर्को एक जानकारीमा उक्त वनभाेजमा पोखरामै कर्यक्षेत्र रहेका नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका केही घुमुवाहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुलाई सम्बन्धित सुरक्षा निकायले के कस्तो कारवाही गर्यो भन्ने खुलेको छैन् ।
विगतको नजीर कस्तो छ ?
यसअघि पनि पोखरामा लापरबाही गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही भएको थियो । जुवाखालबाट बरामद भएको रकम चोरी गरेको आरोपमा गएको बर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका घुमुवा प्रहरी प्रमुख असई सन्तोष सुवेदी लगायत तीनजना प्रहरीलाई कारबाही गरिएको थियो ।
तत्कालिन एसपी दानबहादुर कार्कीका विश्वास प्राप्त घुमुवा रहेका असई सन्तोष सुवेदीले सीसीटीभी फुटेजमा बरामद रकम लुकाएको प्रष्ट देखिएपछि सुवेदीको ग्रेड रोक्का गरेर तनहुँ सरुवा गरिएको थियो ।
यस्तै प्रज भवनाथ लामिछाने लगायत दुई जनालाई सरुवा गरिएको थियो । तर उनीहरु अहिले पुन पार्दीस्थित प्रहरी गणमा सरुवा भएर आएका छन्, घुमुवाको रुपमा कार्यरत छन् ।
गण्डकी प्रहरी प्रदेश कार्यालयले अनुशासन उल्लंघन गर्ने प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ ।
गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिन : डीआईजी अर्याल
पछिल्लो समय डीआईजी अर्यालले अनुशासन उल्लंघन गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया तीब्र पारेका छन् । प्रहरीको बर्दी लगाएर अनुशासन उल्लघन गर्ने जोसूकै भएपनि विभागीय कारबाही गर्ने उनको भनाई छ । वनभोजमा रमाइलो गर्न गएपनि अरुलाई डिस्टर्ब हुने गरी होहल्ला र कुटपिट भएपछि विभागीय कारबाही गरेको डीआईजी अर्यालले बताए ।
‘बाहिर मिडियामा आएजस्तो ठूलो समस्या होइन’ डीआईजी अर्यालले नेपालबहससँगको कुराकानीमा भने, तर वनभोज वा रमाइलो गर्न गएपनि अरुलाई डिस्टर्ब हुने गरी कुटपिट र हो हल्ला गरेको सुनेपछि तुरन्तै छानबिन अगाडी बढाएको हुँ । कारबाही भइसकेको छ ।’
प्रहरी संगठनभित्र रहेर अनुशासन उल्लंघन गर्ने जौसूकैलाई पनि कारबाही गर्ने अर्यालले दोहोर्याए । ‘प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन महत्वपूर्ण कुरा हो । कसैले पनि अनुशासन उल्लंघन गरेको थाहा पाउनेवित्तिकै मैले कारबाही अगाडी बढाएको छु’ उनले भने, ‘यसपटक पनि वनभोज गएर हल्ला गरेको सुचना पाउनेवित्तिकै कारबाही गरेको हुँ । गल्ती गर्ने कसैलाई पनि म छाड्दिन । कारबाही गरेरै छाड्छु ।’